Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2020 à 04:45
2 169 octets ajoutés , il y a 2 mois
Endrik'io pejy io tamin'ny 13 Novambra 2020 à 19:10 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Novambra 2020 à 04:45 (hanova) (esory)
Ny fahasahiranana nahazo ny raharaham-barotra tao Repoblika Demôkratikan’i Kôngô dia nohamafisin’ny fahasimban’ny lalana. Ny lalam-by izay mitotaly 3 641 km no fitaovam-pitaterana lehibe indrindra anatin’ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô, izay mampifandray amin’ireo seranan-tsambon’i Angôla ao Benguela, sy amin’ny faritra atsinanana sy atsimon’i Afrika. Ny fahasimban’ny arabe (153 497 km) hatramin’ny taona 1990 dia manelingelina ny famatsiana ny tsena maro ny fitaterana ny harena voa-janahary. Ny renirano sy ny ony azo ifamoivoizana amin’ny sambo, izay mirefy 17 285 km, no tena ampisaina, ka ny ony Congo dia azo ifamoivoizana amin’ny ampahany avy any amin’ny vinany fivarinany any an-dranomasina ka hatrany amin’ny tanànan’i Matadi ary any an’ava (AMONT)n’nyan’avàn’ny tanànan’i Kinshasa. Misy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena dimy ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô.
Ny varotra ivelany tao Zaira taloha dia tsy mifandanja satria ny fanafarana entana no be. Nifamadika izany tamin’ny taona 1991. Ny varahina dia misahana ny antsasaky ny vola miditra amin’ny fanondranana entana. I Belzika, i Etazoia, i Alemaina ary i Frantsa no mpiara-miombona antoka momba ny varotra ivelany amin’ny Repoblika Demôkratikan’i Kôngô.
=== Ny fivavahana ===
Ny ankamaroan’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô dia [[Kristiana]] ka ny 47 % dia [[Katolika|Katôlika]] ary ny 28 % [[Protestantisma|Prôtestanta]]. Vitsy an’ isa ny [[Finoana silamo|Miozolmàna]]. Ny fivavahana mifangarohanro (toy ny [[kimbangisma]] izay arahin’ ny 3 %n’ ny mponina) dia manafangaro singa avy amin’ ny [[kristianisma]] sy ny [[fivavahan-drazana afrikana]].
=== Ny fiteny ===
Ny [[Fiteny frantsay|teny frantsay]] no teny ôfisialin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô. Misy fiteny tompon-tany miisa 220 ny ao amin’ io firenena ka ny ankamaroan’ ireo dia [[fiteny banto]], nefa ny efatra no natao fitenim-pirenena ifaneraseran’ ny mponina, dia ny [[fiteny soahily]], ny [[fiteny lingala]], ny [[fiteny kikôngô]] ary ny [[fiteny tsiloba]].
Ny fiteny soahily dia tenenin’ny 35 %n’ ny mponina ao amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao ao amin’ ireo ivontoerana lehibe sy ao amin’ ny faritra atsinanana (Katanga, Nord-Kivu, Sud-Kivu, ary ny faritra atsimo atsianan’ ny faritany Orientale). Ny fiteny lingala dia tenenin’ ny 30 %n’ ny mponina, ao [[Kinshasa]] sy ao amin’ ny faritanin’ i Bandundu, ao amin’ ny faritanin’ i Équateur ary ao amin’ ny faritany Orientale. Ny fiteny kikôngô izay tenenin’ny 15 %n’ ny mponina, ao Bas-Congo. Ny fiteny tsiloba izay ampiasain’ ny 15 %n’ ny mponina, ao amin’ ny faritany roa ao Kasaï.
=== Ny fampianarana ===
Tamin’ ny taona 2005 dia nahatratra 89,8 %n’ ny mponina no mahay mamaky teny sy manoratra. Zaza telo amin’ ny efatra (75 %) no tafiditra an-tsekoly tamin’ ny taona 1980. Na dia izany aza, ny fifanolanana ara-pôlitika tamin’ ny taona 1990 dia niteraka fihenanan’ ny fankanesan’ ny zaza ny an-tsekoly tamin’ ny faritra maro, noho izany dia nidina ambanin’ ny 40 % isan’ ny zaza 12 hatramin’ ny 17 taona mianatra. Na dia ambany dia ambany aza ny tahan' ny fidirana an-tsekoly any amin’ ny ambaratonga fahatelo dia ahitana oniversite telo ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô izay miorina ao Kinshasa sy [[Lubumbashi]] ary Kisangani.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/998462"